पत्रकार सम्मेलनमा रोए डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । पत्रकार सम्मेलनमा डा. गोविन्द केसी रोएका छन् । टिचिङ अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसी रोएका हुन् । डा. केसीले आफू अनशन बस्दा जुम्ला र देशका धेरै नागरिक उपचार पाउनबाट बन्चित हुनुपरेको भन्दै रोएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा रुँदै डा. केसीले सरकारले गर्नुपर्ने काम केसीले गरेको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अब सरकारको भएको कारण सम्झौता कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरे । आफूसँग गरेको सम्झौता सरकारले पूरा गर्ने र आफुलाई नियमित काममा पठाउने बिश्वास उनले व्यक्त गरे ।
अनशन तोडेर १३ दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धी बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने लगायत बाँकी ६ बुँदालाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजान आग्रह गरे ।
६ दिन लामो आईसीयुको बसाई र एक साता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएका डा. केसीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै उनले आफूसँग गरेको सम्झौता छिट्टै नै पूरा गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
छलछाम भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले त्यो अवस्था आउन दिने छैन् । अब कुनै बहाना वा ढिलाई नगरी शीघ्र संसदबाट सो ऐन जारी हुनेमा विश्वस्त छु ।’